दिउँसो सुत्ने बानी: फाइदा कि बेफाइदा? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
दिउँसो सुत्ने बानी: फाइदा कि बेफाइदा?
स्वास्थ्यखबर शनिबार, जेठ २१, २०७९, १८:१५:००
काठमाडौं- दिउँसो सुत्नु राम्रो हो वा नराम्रो प्रश्न सामान्य लाग्न सक्छ। तर, यो हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो। अनुसन्धानमा के देखिएको छ भने, दिउँसो सुत्दा अल्छी हुने होइन बरु ताजगी महसुस हुन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा समेत वृद्धि हुन्छ।